Iqoqo - Izibuko Zamadoda
Free Spirit Omnyama / Olubomvu
Free Spirit Mnyama / Mnyama
Kahoa Mnyama / Bomvu
Frontier Mnyama / Mnyama
UFreeride Ufudu / Luhlaza
Frontier Mnyama / Luhlaza okwesibhakabhaka
IFreeride Blue / Mnyama
IKahoa Green Haze / Mnyama
Ukuqubuka Kofudu / Brown
UKahoa Mnyama / Mnyama
Ukuqubuka koHaze oluMnyama / Okumnyama
IFreeride Emnyama / Yethusi
Free Spirit I-Tortoise / Mnyama
Ukuqubuka Okumnyama / Kwethusi
Polar Mnyama / onsundu
IFreeride Blue / Bronze
UKahoa Ufudu / Mnyama
Kahoa Mnyama / Bronze
UFrontier Brown Camo / Mnyama
UFrontier Omnyama / Wethusi
Free Spirit Okuluhlaza / onsundu
UFrontier Ufudu / Luhlaza
Free Spirit Camo / Mnyama
Free Spirit Mnyama / onsundu
En The Indian Face Siyaziqhenya ngokunikela ngamaqoqo ezibuko zelanga polarIzintambo ezenzelwe ukuhambisana nawe kuzo zonke izivakashi zakho nokuzijabulisa kwezemidlalo. Siyaziqhenya ngokuba ngesinye sezibuko zelanga ezihamba phambili emakethe, ikakhulukazi esigxile ekwakheni amamodeli ezibuko zelanga polarizas zamadoda, zombili izikhathi zakho zezemidlalo kanye nosuku nosuku lwakho. Izibuko zethu zelanga polarIzindonga zamadoda zilungele ngokuphelele izidingo zabasubathi abasezingeni eliphezulu emikhakheni eminingi ehlanganisa ukugijima, ukuhamba ngebhayisikili neminye imidlalo eyeqisayo neyama-adventure. Ngokuziqhenya siyakwazi ukusho ukuthi sinikela ngezibuko zelanga ezihamba phambili zabesilisa ezitholakala emakethe, ikakhulukazi ngenani lentengo / isilinganiso sazo sendlela abagcwalisa ngayo izingubo ukhonkolo, yiba yilokhu umsubathi o Okuvamile.
Sinikeza ozimele abenziwe nge-polycarbonate yokumelana okuphezulu nokukhanya. Umkhiqizo wethu uneminyaka engaphezu kwengu-15 udizayina ezemidlalo kanye nemfashini engajwayelekile, ngakho-ke, sikumema ukuthi uthembe isipiliyoni sethu, esivunywa amaklayenti ethu unyaka nonyaka, futhi uthenge izibuko zabesilisa kuwebhusayithi yethu ngendlela elula, entofontofo nephephile . Esitolo sethu sezibuko zasemoyeni zabesilisa siqinisekisa ngezingilazi ezinhlobonhlobo, ngayinye yazo ngokuvikelwa UV400.
En The Indian Face Singabasubathi abazalwa benenhloso yokwenza izesekeli zezemidlalo ezihamba phambili nezibuko zelanga ezihamba phambili emakethe. Njengamanje singomunye wemikhiqizo yezingilazi zamadoda ezinamazinga aphezulu kakhulu, ngokufanayo, njengoba ubona esitolo sethu esiku-inthanethi, sinesitayela esihlukile sezigqoko zemfashini zamadoda, amawashi nezibuko zelanga. Sinikela ngezinhlobo zonke zezingilazi zamadoda zesimanje nezesekeli zezemidlalo eziklanyelwe ukumelana nezimo zezulu ezahlukahlukene lapho imimoya yethu yaseNdiya yenza imidlalo ye-adventure nemidlalo eyeqisayo. Sikumema ukuba uvakashele i-Men's Sunglasses Outlet yethu futhi uthenge okuthandayo, ukuze unakekele umbono wakho futhi uhlale usemfashinini, noma ngabe uzivocavoca umdlalo owuthandayo noma uwufuna usuku nosuku.
Yini izibuko zelanga polaruthukile?
Ziyizibuko zelanga ezinamalensi anokuhlunga vertical Ivimbela imisebe yokukhanya evela elangeni efinyelela emehlweni ngokuvundlile.
Yini inzuzo enkulu yezibuko zelanga polaruthukile?
Inzuzo enkulu yezibuko zelanga polarukuphakanyiswa kukwenza umbono wakho ube mnandi futhi ukhululeke, ngenkathi kukuvikela emisebeni ekhiqizwa yilanga. Ngale ndlela, banikeza abesilisa nabesifazane ithuba lokwenza imisebenzi yangaphandle ngombono ovikelekile noweshesha.
Yiziphi ezinye izinzuzo zokuthenga izibuko zelanga polariphakanyiselwe amadoda?
Izibuko polarIzindwangu zomuntu zinikeza umbono ngaphandle kokucabanga, ikakhulukazi okuvundlile.
Izibuko polarAma-hoist wesilisa ahlinzeka ngokucija okukhulu nezinga eliphakeme lokuqhathanisa.
Izibuko polarIzindonga zomuntu zinciphisa i-eyestrain kanye ne-eyestrain ngokunikeza umbala wemvelo kanye ne-primal.
Okokugcina, isihlungi sezibuko zelanga polarI-man hoist ingahlanganiswa nezinye izihlungi ezibalulekile, njengezihlungi ezikhanyayo ezibonakalayo kanye nesihlungi se-UV, esidingwa ngumthetho, ngendlela yokuthi zivikele ngokuphelele.
Izibuko zelanga polaramadoda aphakanyisiwe yiyona ndlela engcono kakhulu kimi?
Izibuko polarAmadoda aphakanyisiwe ayohlala eyindlela yakho engcono kakhulu. Khumbula ukuthi kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi ziqinisekisiwe yi-EU kanye nokuvikelwa kwe-UV 400. Abanye ngeke bakufanele ukukuvikela elangeni futhi ugcine umbono wakho uphumule futhi ushesha ngesikhathi esisodwa, ngakho-ke kuboniswa kakhulu ukusetshenziswa emisebenzini yezemidlalo yangaphandle nakwezemidlalo ye-adventure.
Ungazikhetha kanjani izibuko zelanga ezihamba phambili polarindoda ephakanyisiwe?
Uma ufuna ukugqoka izibuko zelanga ezihamba phambili zabesilisa, cabanga ukuthi iziphi ezizokufanela kahle, izibuko zelanga eziyisikwele zabesilisa, noma izibuko zelanga eziyindilinga zabesilisa. Kufanele futhi ucabangele umsebenzi ozowenza, uma unjalo ngaphakathi noma uma kunjalo ngaphandle, uma kusemini noma kusebusuku, uma kusehlobo noma ebusika. Zonke lezi zinto zithonya isinqumo sakho lapho uthenga esitolo sethu sezibuko zamadoda online.
Yini okufanele ngiyikhumbule lapho ngithenga izibuko zelanga zabesilisa?
Ukuthenga izibuko zelanga zabesilisa kungaba lula kakhulu uma wazi ukuthi ungakwenza kanjani. Okokuqala, kufanele uthenge izibuko zelanga zamadoda ezihlangabezana nezitifiketi ezifanele ezivunyelwe yi-EU. Ngaphezu kwalokho, kufanele uqinisekise kusengaphambili ngaphambi kokuthenga ukuthi izibuko zelanga polarindoda ephakanyiswe ngokuvikelwa UV400Futhi izibuko zelanga eziku-inthanethi zamadoda esizinikeza kuwebhusayithi yethu. Kubalulekile ukuthi uthenge izibuko zelanga ezihamba phambili zabesilisa ukuze uvikeleke impela emisebeni yelanga ye-ultraviolet.
Futhi, gcina njalo isitayela sakho engqondweni ngaphambi kokuthenga izibuko zabesilisa. Ungaba isitayela sendoda egqoka izibuko zelanga eziyindilinga, izibuko zelanga eziyisikwele, noma izibuko zelanga ezihamba phambili. Uyazi ukuthi yini isitayela sakho sezibuko zelanga zabesilisa? Abantu abaningi bakholelwa ukuthi abesilisa abachithi isikhathi bekhetha uhlobo lwezesekeli ezingajwayelekile noma ezemidlalo abazisebenzisayo, noma kunjalo, lesi simiso asilungile.
Ingabe amadoda amaningi ayathenga futhi agqoke izibuko zelanga?
Izibuko zelanga zemfashini zamadoda zingesinye sezinto ezithengiswa kakhulu ku-inthanethi ezwenikazi laseYurophu, futhi thina, njengesitolo sezibuko zamadoda online, sikuhlola nsuku zonke, lapho amakhulukhulu amakhasimende athembela ikhwalithi yemikhiqizo yethu futhi azinikele ekuthengeni. ngokwabo, nokunikela kubathandekayo babo.
Ku- The Indian Face Ngingazithenga izibuko zelanga zabesilisa?
Esitolo sezingilazi zethu zamadoda uzothola imikhiqizo ehlukahlukene nezinhlinzeko eziningi zezingilazi zamadoda nezesekeli zemidlalo ezikulungele, ngokusebenza okuphezulu kakhulu nangamanani entengo amahle kakhulu. Kulula kakhulu ukuthenga izibuko zamadoda kuwebhusayithi yethu ngokuphepha okuphelele nokunethezeka.
Ku- The Indian Face Ngingathola amadili ngezibuko zelanga zabesilisa?
Engxenyeni yethu yokuphuma uzothola Izipesheli Zelanga Zabesilisa ezivumelana nazo zonke izidingo zamakhasimende ethu. Ngaphezu kwalokho, uma ujoyina incwadi yethu yezindaba, sizokuthumela okunikezwayo nezenyuso ongeke ukwazi ukuzikholelwa. Ukunikezwa kwezibuko zethu zamadoda kusetshenziselwa imikhiqizo ekhethiwe ngokwesigaba ngasinye.
Yiziphi izibuko zelanga ezihamba phambili zamadoda?
Izibuko zelanga ezihamba phambili zamadoda yilezo ezikhiqizwe ngokusebenza okuphezulu esigabeni sabo, ngezinto zokwakha ezingazweli kepha ezingasindi. Ku- The Indian Face Iphuzu lethu elikhulu kunawo wonke isilinganiso sethu senani lekhwalithi / lentengo, esaziwa emakethe nangokuncintisana kwethu njengabaholi kulokhu. Ngakho-ke, labo obathola esitolo sethu se-inthanethi yizibuko zelanga ezihamba phambili zabesilisa emakethe, ezivunyelwe futhi zaqinisekiswa yi-EU.
Zitholakala kanjani izibuko zelanga zabesilisa ku The Indian Face?
Izibuko zethu zelanga zabesilisa zinezici ezilandelayo:
Izibuko zelanga zabesilisa ezinefreyimu eguquguqukayo nesitayela se-unisex.
Izibuko zelanga zesimanje zamadoda ezinamalensi e-TAC PolarIncazelo ephakeme iphakamisa
Izibuko zelanga zabesilisa ezinamalensi e-CAT.3 nama-UV- 400 protection.
Izibuko zelanga zemfashini zamadoda ngohlaka olwenziwe nge-polycarbonate yokukhanya okuphezulu nokumelana.
Izibuko polarumuntu uphakamisa ngamahinge we-titanium aqinile
Izibuko zelanga zabesilisa ezinamalensi polarIzindlwana zamasayizi nemibala ehlukene.
Iqoqo lethu lezibuko zelanga polarindoda ephakanyisiwe yakhiwe ngezinhlobonhlobo zamamodeli nemibala. Kukhathalogi yethu yezibuko zelanga zabesilisa uzothola izibuko zelanga eziyindilinga, izibuko zamehlo zesikwele samadoda nazo zonke izinhlobo zelanga lesibuko samanje nezibuko zelanga zabesilisa.
Sinjani isitolo sezibuko zelanga The Indian Face?
The Indian Face wumkhiqizo wedijithali wezibuko zelanga polarindoda ephakanyisiwe, sithengisa zonke izinhlobo zethu zezibuko zelanga polaryaphakanyiswa esitolo sethu sezibuko zamadoda online. Sikhona nakwabanye odokotela bamehlo abaziwa kakhulu kulo lonke elaseSpain. Sinikeza izibuko zamadoda ngokusebenza okuphezulu emakethe, ezisezingeni eliphakeme. Kuwebhusayithi yethu uzothola zonke izinhlobo zokunikezwa kwezibuko zamadoda, ikakhulukazi esigabeni sethu se-Men's Sunglasses Outlet.
En The Indian Face Kade sifunde i-optics namathrendi iminyaka eminingi sakha ukuqoqwa kwezibuko zelanga eziyindilinga zamadoda nezibuko zelanga zabesilisa, unyaka nonyaka ezidlula okulindelwe yiwo wonke umuntu. Bobabili abasubathi abaningi abazinikele ekuthengeni, kanye nemilutha yasemgwaqeni engahambisani nalokho abathengile kithi baneliseke kakhulu ngokuthenga kwabo izibuko zelanga polarized men, ngakho-ke, bancome izibuko zethu zamadoda esitolo sethu sesibuko samadoda online.
Izinzuzo nenqubo yokuthenga izibuko zelanga polarindoda ephakanyisiwe yangena The Indian Face:
Thenga izibuko zamadoda ngokusebenza okuphezulu emakethe.
Thenga izibuko zelanga zabesilisa ku-inthanethi ngokuphepha futhi ngokushesha kuma-platforms aqinisekisiwe njengalawo esiwanikeza endaweni yethu yewebhu.
Vakashela isitolo sethu sezibuko zamadoda bese ubheka amaqoqo ethu amasha, ukwazi ukukuqondisa ezingutsheni ezintsha.
Ngena enqoleni yakho yokuthenga izibuko zethu zamadoda eziku-inthanethi ugcina ezemidlalo nezesekeli ezikhululekile ozithanda kakhulu, kufaka phakathi izibuko zelanga zabesilisa ozithandayo futhi ezilingana kangcono nesitayela sakho sezemidlalo.
Uma unekhodi yesaphulelo, ungayisebenzisa ekuthengeni esigabeni esithi "faka ikhodi yesaphulelo", ngale ndlela ungathenga izibuko zelanga zabesilisa online ngezipesheli, njengoba kungaba njalo. Okunye ongakwenza ukuthenga izibuko zamadoda esigabeni sethu esidayisa izibuko zamadoda, lapho ungathola khona izinketho eziningi zezibuko zelanga ezibandakanya izibuko zelanga eziyindilinga, izibuko zesikwele sabesilisa, izibuko zamehlo zemfashini nezibuko zelanga amadoda anamuhla, konke anesitayela sezemidlalo, esilungele ukuzijabulisa kanye ukusebenza okuphezulu kakhulu.
Ukuqedela, mane uchaze imininingwane yakho yokuthumela, qedela inkokhelo futhi sizokuthumela izibuko zakho zelanga ezintsha polarindoda iphakamise ekhelini olibonisayo.
Khumbula ukuthi intengo ephansi akusho ukuthi ikhwalithi ephansi. Eqinisweni, ungathenga izibuko zamadoda ngezaphulelo ezinkulu esitolo sethu se-inthanethi www.theindianface.com, ikakhulukazi esigabeni esidayisa izibuko zamadoda ethu.
En The Indian Face sinezibuko zesimanje zendoda ezinamalensi polariphakanyiselwe noma yiluphi uhlobo lwezimo, kanye nozimele bokukhanya be-ultra ukuze bazizwe kangcono futhi baduduzeke.
Sikumema ukuthi ungene esitolo sethu sesibuko samadoda esiku-inthanethi ukuthola izinketho ezifanele ezizokwazi ukuzivumelanisa nazo zonke izidingo zakho njengomsubathi wanamuhla: ungathola izibuko zelanga eziyisikwele zamadoda, izibuko zelanga eziyindilinga zamadoda, izibuko zelanga zemfashini zamadoda nezibuko zamadoda zesimanje, nazo imiklamo yamadoda.
Futhi ungakhohlwa ukuvakashela isitolo sezibuko zamadoda ethu! Ungakhetha izinketho ezinhle kakhulu ngokunikezwa kuzinsiza ezikhululekile nezemidlalo, kanye nokunikezwa kwezibuko zabesilisa ezihamba phambili. Khetha izintandokazi zakho bese ukukubona on the adventure!